Andro: 16 mey 2020
PTTBank EFT System dia natambatra tao anaty rafitra Banky Foibe
Ny fifanakalozana transTreport dia azo atao mivantana avy amin'ny kaonty PTTBank niditra tao amin'ny rafitra EFT Central Bank. Miara-miasa amin'i Turkey izay iray amin'ireo mpanjifa lehibe indrindra amin'ny pttbank ara-bola lehibe, toeram-piasana 5 4, ATM akaiky ny XNUMX, [More ...]
Ny filoha Recep Tayyip Erdoğan dia nanatrika ny lanonana famaranana tamin'ny Çanakkale 1915 tamin'ny tilikambo teo amin'ny torolalana tamin'ny fihaonambe video miaraka amin'ny minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa Adil Karaismailoğlu. Erdogan sy Karaismailoğlu nandritra ny lanonana nanatanterahana ny iray amin'ireo tilikambo teo amin'ny tetezana [More ...]
Ora amin'ny fanandramana Metro tao Istanbul ho famerana ny andro 4 andro
Miaraka amin'ny boriboritany ny ministeran'ny atitany, dia alefa manerana an'i Istanbul ny fandroahana amin'ny 16-17-18-19 Mey. Mba hisorohana ny olom-pirenentsika izay tsy maintsy miasa noho ny adidy tsy maintsy ananana sy ny mpiasan'ny fahasalamana mandritra ny famerana, [More ...]
Akamsaray Trams nandrakotra ny halavam-paty 85 arivo isam-bolana
Nandeha 85 kilometatra tao amin'ny kaominina Kocaeli Metropolitan Trak, tamin'ny volana lasa teo, nanome serivisy fitaterana haingana sy malefaka ary madio ho an'ny olom-pirenena. Mandalo ny lakolosy Akçaray, izay lasa mariky ny tanàna [More ...]
Fanambarana momba ny gara Istanbul ao Istanbul İmamoğlu
Ny filohan'ny İBB Ekrem İmamoğlu dia nandinika ny asa fanavaozana ao amin'ny Grand Istanbul Bus Terminal, izay lasa nofinofy mampatahotra ny olom-pirenena tato anatin'ny taona vitsivitsy. Hoy i İmamoğlu: "Adinonay ny trano fitobiana Bus Istanbul, izay hadino [More ...]
Imamoglu, ilay mpandeha tao amin'ny Ferry Bandirma
Ny filoha İBB Ekrem İmamoğlu dia niantso avy ao Galata Quay, toerana fiandohan'ny fihetsiketsehana Atatürk avy any Istanbul ka hatrany Samsun miaraka amin'ny Bandırma Ferry: [More ...]
Ny hetsika sinema fiara nostalgik an'ny munisipalin'ny İzmir Metropolitan dia nahita maso sary maro loko. Ireo olompirenena Izmir, izay tsy afaka nandao ny tranony noho ny fepetra coronavirus, dia nahita morale niaraka tamin'ny screur sarimihetsika miaraka amin'ny isa enina. Izmir Metropolitan kaominina [More ...]
Fahazotoana amin'ny fety miaraka amin'ny Hust Treasure Online amin'ny 19 May
Izmir Metropolitan Munisipaly dia mitondra ny hafaliana ny 19 May ho any an-trano mandritra ny andro corona. Ho fanampin'ny hetsika maro havoaka amin'ny sehatra nomerika, dia mikarakara fifaninanana antsoina koa hoe Online Treasure Hunt. 7 ora 19 minitra [More ...]
Bayraktar TB2 UAV Ny fandefasana ny talen'ny tale jeneralin'ny fiarovana
Ny fiarovan-tenan'i Baykar dia natolotra fiara fitaterana an'habakabaka telo hafa any Bayraktar (UAV) any amin'ny departemantan'ny fiaramanidina goavambe. Momba ny resaka, ny Filohan'ny Fiadidiana Tiorka, Indostrian'ny fiarovana. Dr. Ismail [More ...]
UAV Base naorina ao amin'ny Distrikan'ny Cizre ao Şırnak
Didy Fiaramanidina an'habakabaka (UAV) Tactical tsy niasa teo amin'ny alàlan'ny Komandin'ny Jeneraly Gendarmerie ho an'ny Bayraktar TB2 karazana SİHA ao amin'ny distrikan'i Cizre any Şırnak. Tamin'ny fanambarana nataon'ny Minisitry ny Atitany Süleyman SOYLU, [More ...]
Isika no voalohany sy fananganana faharoa eran'izao tontolo izao amin'ny famokarana entana fotsy
Minisitry ny indostrianaly sy ny teknolojia Mustafa Varank, ny sehatry ny entana fotsy dia iray amin'ny filazan-java-mahamenatra ny tarehin'i Tiorka, "volan'ny famokarana, fitodiana, fampidinana ary manome anjara amin'ny firenentsika miaraka amin'ny fanondranana lehibe indrindra amin'ny fampandrosoana. Manakaiky tonga lafatra [More ...]
ALO Lines Mbola mitohy ny fanolorana tolotra tsy misy hatak'andro ho an'ny vahoaka
Ireo andalana 'ALO', miasa eo ambany fandrindran'ny Ministeran'ny Fianakaviana, Asa ary Asa sosialy, Gazety ho an'ny Fifandraisana ho an'ny daholobe dia miangavy mafy amin'ny fiadiana amin'ny karazana coronavirus vaovao. Ny minisitry ny fianakaviana, ny asa ary ny asa sosialy Zehra [More ...]
Covidien-19 Ny takelaka fampiharana ny fepetra dia natao tany amin'ny tanàna 81 any Tiorkia
Miaraka manerana an'izao tontolo izao mba hahitana raha efa nisy ny fanapahan-kevitra noraisin'ny Ministeran'ny Atitany, ny Direction Générale de Security, ny Gendarmerie General Command ary ny mpiambina ny morontsiraka any amin'ny faritry ny karazana coronavirus (Covid-19). [More ...]
Niova ny fihodin'ny olom-pirenena 65 ary mihoatra
Araka ny fanambarana nataon'ny Ministeran'ny atitany, araka ny angon-drakitra momba ny meteorolojia, momba ny fanombanana ny mari-pana amin'ny rivotra ny alahady 17 mey noho ny torolàlana nataon'ny filoha Recep Tayyip Erdogan, ny aretim-pahasalamany amin'ny faha-65 taonany. [More ...]
Hamafisin'ny fiarovana mafimafy momba ny tatitra Kovid-19 an'ny Akademia an'ny polisy
Ny tatitra, nomanin'ny Fiadidian'ny Akademia Polisy, dia nilaza fa ny zava-nitranga nandritra ny areti-mifindra dia nanaporofo fa ny fomba fiasa amin'ny sehatry ny fiarovana dia tsy ampy, ary ilaina ny fahalalana tsara ny filaminana ao amin'ity faritra ity. Fipoahana Kovid-19 ary mihoatra ny iraisam-pirenena [More ...]
Rize Logistics Center mankany Tender
Ny solombavambahoaka AK Party Rize Muhammed Avcı dia nilaza fa nanome vaovao tsara ny filoha Erdoğan ho an'ny Logistics Center fa efa niandry ela izy ary nisaotra an'i Erdogan noho ny foibem-barotra nentina tany Rize. AK General General [More ...]
Fandaharana sidina manokana mandritra ny 4 andro ho an'ny mpandeha eo ambanin'ny fanaovan'ny IZBAN
Fandaharana manokana momba ny sidina 4 andro ho an'ny mpandeha eo ambanin'ny fanaovan'ny IZBAN; Amin'ny andro 16-17-18 sy 19 Mey, rehefa ampiharina ny curfew; Nanambara i İZBAN fa hanao drafitra fiaramanidina manokana ho an'ireo mpandeha an-tanana izany. Ao amin'ny twitter ofisialin'i IZBAN [More ...]
Mitohy ny asa fanamboarana fotodrafitrasa sy ny fanamboaran-dàlana nataon'ireo ekipa mpitantana ny Karabük ao amin'ny Keltepe Ski Center. Mehmet Uzun, Sekretera jeneralin'ny Fitantanana ny faritany manokana, Hasan, Lehiben'ny fivoriambe ankapobeny [More ...]
Samsun Sivas Railway dia hanome haingam-pandeha vaovao ny làlamben'i North-South
Samsun-Sivas Kalın fiaran-dalamby, izay nohavaozina ho an'ny Ministeran'ny Fitaterana sy ny fotodrafitrasa ary mikendry hitondrana entana 3 tapitrisa taonina isan-taona, dia hanome tsindry vaovao amin'ny fitaterana lozika amin'ny lalamby avaratra-atsimo. Tiorkia [More ...]
Niompana amin'ny fiainana ny tetikasan'ny sampan-draharahan'ny sampana miandraikitra ny alàlan'ny fiantsonan'i Niğde Special
Ny ben'ny tanàna Niğde Emrah Özdemir nanafaingana ny ezaka nataony mba hahatsapan-dry zareo ireo tetik'asa tao amin'ilay bokin'ny tetikasa nandritra ny fizotran'ny firotsahan-kevitra ho fanamorana ny fitohanan'ny fifamoivoizana eo afovoan-tanàna. Miampita amin'ny fizarana manakana ny fikorianan'ny fifamoivoizana [More ...]
Sintesialy eo an-toerana ampiasaina amin'ny fitsaboana Covid-19 Hatao amin'ny volana Jona
Ny minisitry ny indostria sy ny teknolojia Mustafa Varank dia nitatitra fa ny fitrangan'ny fanafody eo an-toerana amin'ny fitsaboana amin'ny karazana coronavirus (Covid-19) dia hatao amin'ny volana jona. FAMPISOKOANANA ho an'ny PROJECT Minisitra Varank dia nandray anjara tamin'ny Covid-17 tamin'ny programa izay nandray anjara tamin'ny saluran TRT News. [More ...]
Fanohanana 70 tapitrisa TL ho an'ny SME izay mahazo fiofanana amin'ny orinasa orinasa
KOSGEB dia hanohana hatramin'ny 70 TL mankany SME izay hahazo fiofanana avy amin'ny Model Factory. Ny fanambaràn'ny lalàna, ny minisitry ny indostria sy ny teknolojia Mustafa Varank dia nanantitrantitra indray ny maha-zava-dehibe ny fanovana nomerika mandritra ny vanim-potoanan'ny valan'aretina. [More ...]
Indostrian'ny fiara sy ny orinasa Enterprise Group Inc. Nisokatra ny vinainginan'ny EIA momba ny tetik'asa famokarana fiara mandeha amin'ny herinaratra izay namboarin'orinasa. Fahazoan-dàlana amin'ny fanaraha-maso sy ny fisafoana ny tontolo iainana [More ...]
Orinasa misy lalamby izay miasa amin'ny anaran'i Company Government Railway Company (Railway Railway Company) tamin'ny taona 1905-1951. Niasa teo amin'ny tsipika teo anelanelan'i Evrihu ao amin'ny Lefke sy ny tanànan'i Famagusta izy. Taonan'ny asa [More ...]
Tanàn'i Bulgaria ao amin'ny tanàna Kardzhali Rusalsko Light ao an-tanànan'i Ali Durmaz dia teraka tamin'ny 1935, tonga tao Torkia tamin'ny taona 1950, nandao ny zava-drehetra tao Bulgaria, ary nanomboka niaina tao Bursa Mudanya izy ireo. Business mandritry ny androm-piainany [More ...]